ဆောက်လုပ်ရေး mesh Panel ကို - တရုတ် Hebei Samsung ကသတ္တုဝါယာကြိုးကွက်
ဆောက်လုပ်ရေး mesh Panel ကို
ဆောက်လုပ်ရေး mesh Panel ကိုဂဟေဝါယာကြိုးကွက်ခြံစည်းရိုး panel က / welded ကွက် panel က / welded ကွက်ခြံစည်းရိုး / welded ကွက်ခြံစည်းရိုး / welded panel ကိုခြံစည်းရိုးပါဝင်သည် 1. welded ကွက်ခြံစည်းရိုး panel ကိုအနိမ့်ကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်သံမဏိဝါယာကြိုး welding ကဖွဲ့စည်းသည်။ ဒါဟာပူ-နှစ်ပြီးသောသွပ်ရည်စိမ်, လျှပ်စစ်သွပ်ရည်စိမ်, PVC-coated, အထူးဂဟေဝါယာကြိုးကွက်ပါဝင်သည်။ welded ကွက် panel ကိုစွမ်းရည်မြင့်မားသော antisepsis နှင့် oxidation- ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်အတွက်ကာကွယ်ဆောက်လုပ်ရေး, ခြံစည်းရိုး, အလှဆင်ခြင်းနှင့်စက်ယန္တရားအဖြစ်အသုံးပြုနိုင် ...
FOB စျေး: အမေရိကန် $3- 10 / စာရွက်
Min.Order အရေအတွက်: 20 စာရွက် / Sheet များ
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: နေ့နှုန်း 5000 စာရွက် / Sheet များ
ဆောက်လုပ်ရေး mesh Panel ကို ဂဟေဝါယာကြိုးကွက်ခြံစည်းရိုး panel က / welded ကွက် panel က / welded ကွက်ခြံစည်းရိုး / welded ကွက်ခြံစည်းရိုး / welded panel ကိုခြံစည်းရိုးပါဝင်သည်
1. welded ကွက်ခြံစည်းရိုး panel ကိုအနိမ့်ကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်သံမဏိဝါယာကြိုး welding ကဖွဲ့စည်းသည်။ ဒါဟာပူ-နှစ်ပြီးသောသွပ်ရည်စိမ်, လျှပ်စစ်သွပ်ရည်စိမ်, PVC-coated, အထူးဂဟေဝါယာကြိုးကွက်ပါဝင်သည်။ welded ကွက် panel ကိုစွမ်းရည်မြင့်မားသော antisepsis နှင့် oxidation- ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်စသည်တို့ကို, ဆောက်လုပ်ရေး, ခြံစည်းရိုး, အလှဆင်ခြင်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း, စိုက်ပျိုးရေး, အသွားအလာနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, သတ္တုတူးဖော်ရေး, တရားရုံး, မြက်ခင်းနှင့်စိုက်ပျိုးမှုအတွက်ကာကွယ်စက်ယန္တရားအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဂဟေဆော်ကွက်ခြံစည်းရိုး Panel ကိုပြားချပ်ချပ်နှင့်အတူ, သာလွန်အရည်အသွေးကို welded ကွက်လုပ်ထားတဲ့ပင်မျက်နှာပြင်, မြဲမြံစွာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေါ်မှာ, အစားအစာ, စိုက်ပျိုးရေးနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုရ။
2. ဂဟေခြံစည်းရိုး panel ကသတ်မှတ်ချက် mesh
ကွက်အရွယ်အစား: 1/2 "-6" (1/2 "x1 / 2", 1 "x1"2"x2"3"X3",4"x4"5"X5"6"x6" 1 "x2"2"X3"2"x4" စသည်တို့)
width နဲ့အရှည်ပြုသောအမှုနိုင် သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြနှုန်းအဖြစ်!
ထုပ်ပိုး: အဝတ်အချည်းစည်းသို့မဟုတ် pallet အပေါ်
3. ဂဟေကွက်ခြံစည်းရိုး Panel ကိုပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့်ဖြစ်စဉ်ကိုထုတ်လုပ်
ပစ္စည်း: Electro welded ကွက် panel ကိုအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
ဟော့သို့ကျဆင်းလာ welded ကွက် panel ကိုအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
အမဲရောင်အနိမ့်ကာဗွန် welded ကွက် panel က
PVC coated ဂဟေကွက် panel ကို
သံမဏိကွက် panel ကို welded
ကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သငျသညျဆိုပါကမည်သည့်မေးခွန်းများကိုတစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုထားခဲ့ဖို့အခမဲ့ခံစားရပါ။
ယခင်: mesh Panel ကိုအားဖြည့်
နောက်တစ်ခု: Staninless သံမဏိဂဟေဝါယာကြိုးကွက်
3D ဝါယာကြိုးကွက် Panel ကို
50mmx 50mm ဂဟေ Panel ကို
50x50 mesh Panel ကို
Aviary ကုမ္ပဏီ mesh Panel များ
Beam ကိုဝါယာကြိုးကွက် Panel ကို
Black ကဂဟေဆော် mesh Panel ကို
coated ဝါယာကြိုးကွက် Panel ကို
ကွန်ကရစ်ဝါယာကြိုးကွက် Panel များ
နှစ်ချက်ကြေးနန်းဂဟေ Panel ကို
grid Panel များ
သံဂဟေဆော် Panel ကို
mesh Panel ကို
သတ္တု mesh Panel ကို
ဝါယာကြိုးကွက် Panel ကို coated ပလပ်စတစ်
အမှုန့် coated ဝါယာကြိုးကွက် Panel များ
PVC coated ဂဟေဝါယာကြိုးကွက် Panel ကို
PVC coated ဂဟေဝါယာကြိုးကွက် Panel များ
PVC ဂဟေဝါယာကြိုးကွက် Panel ကို
PVC ဂဟေဝါယာကြိုးကွက် Panel များ
စူပါအရည်အသွေးဝါယာကြိုးကွက် Panel များ
Uncoated ဂဟေ mesh Panel ကို
welded mesh Panel ကို
welded mesh Panel များ
ဂဟေဂဟေ mesh Panel များ
welded ကြေးနန်းဥယျာဉ် Panel များ
welded ကြေးနန်း Panel ကို 4x4
ဝါယာကြိုးကွက် Panel ကို
ဝါယာကြိုးကွက် Panel များ
ဝါယာကြိုး Panel များ
ကြေးနန်းဂဟေကျွဲနွား Panel များ